Okwakamuva okwenziwe ngensimbi-plastic ipayipi elihlanganisiwe - China Abakhiqizi bamapayipi abakhiqizi bakamuva bensimbi-abakhiqizi, abahlinzeki
Inzuzo Yomkhiqizo, Inokuqina okuhle kokushisa nokuqina komthelela. Ngaphansi kwezimo ze-110 degrees kanye nengcindezi yezemvelo ye-1.9 MPa, ihlolwe amahora angama-8760 ngokuya ngamazinga aphesheya. Kutholakale ukuthi ipayipi belingenakho ukuvuza noma umonakalo. Ipayipi le-PE-RT lingagwema ukungqubuzana okuthile nomthelela wepayipi ngesikhathi sokwakhiwa, futhi kunokusebenza okuhle kwezindleko. ◎ Inezinzuzo zesisindo esincane, impilo ende yenkonzo, ukuguquguquka okuhle nokugoba okulula. Uma kuqhathaniswa ne-XPAP, ...
Ipayipi eliyinhlanganisela le-polyethylene elimelana nokushisa elinensimbi yensimbi enezinkuni
Ipayipi le-polyethylene elenziwe ngaphambilini elenziwe uhlobo oluthile olusha lokushisa kwepayipi, eliqukethe ipayipi elisebenzayo (kufaka phakathi ukufakwa), i-polyurethane eqinile ye-Foam insulation, igobolondo lokuvikela le-polyethylene lokuhlanganiswa kokuhlanganiswa. Njengoba laba abathathu beba umzimba munye, ungcwatshwe ngqo enhlabathini, ingcindezi yokunwetshwa okushisayo okubangelwa izinguquko zokushisa kubhubhu yangaphakathi idluliselwa kungqimba lwe-polyurethane insulation. Ipayipi langaphandle, elibhekene nokushayisana kwenhlabathi, nalo liyadluliselwa ...
Ipayipi lensimbi elenziwe ngopende elenziwe ngamapayipi elihlinzekwa ngamanzi
Ipayipi elihlanganisiwe lensimbi elenziwe ngopende elenzelwe ukwenza izimbobo ngejubane eliphezulu kuzingcwecwe zensimbi ezincanyana ezisezingeni eliphakeme, futhi lenziwa amapayipi wensimbi abiyelwe anezimbobo nge-argon arc butt welding ukuze ibe ukuqiniswa. Ipulasitiki ikhishwa ngaphakathi nangaphandle kwamapayipi wensimbi anezindonga ezincane anezimbobo. Ipulasitiki esodongeni lwangaphandle ihlanganiswe ngokuqinile phakathi kwama-pores ukwakha konke ngepayipi lensimbi eliqinisiwe. Inqubo yokukhiqiza imi kanje: